Isihombiso seKhaya esithe tye iShangri-La Blind Fabric Semi-B...
Iimpawu zeFabriki zeLanga ezinokuVuleka okwahlukileyo
Iimpawu zamalaphu e-sunscreen kunye nokuvuleka okwahlukeneyo Umlinganiselo wemingxuma evulekileyo ngumlinganiselo wemingxuma emincinci edityaniswe yi-warp kunye nemisonto ye-weft yefa ...
Zeziphi iimpawu ze-Zip-proof Roller Blinds kwi-Wind-proof?
Zeziphi iimpawu ze-zip-proof roller blinds? 1. Umthunzi welanga kunye nokhuseleko lwelanga ukugcina ukukhanya kunye nobushushu obukhululekileyo obunobungqina be-zip track roller blinds...
Ziziphi izinto eziluncedo kuHanas Blind?
Njengodidi olutsha lomkhusane, i-hanas blind, ekwabizwa ngokuba yi-Dream Blind ineempawu zokufihla iikhethini zelaphu kunye nembono yamakhethini egauze. Ngexesha elifanayo, i...
Kutheni le nto iHanas Blind isiya idume kakhulu?
Kutheni i-hanas blind isiya ithandwa kakhulu? Okokuqala: uyilo lokuqina kunye nokuguquguquka Umyili wake waphawula malunga namakhethini ephupha, okwabizwa ngokuba yi-hanas bli...
Kumnyango wangaphandle izincedisi zeblindproof blinds zisendleleni
Inkqubo yomzila weZipper ibonakala inzima?, andazi ukuba uyifake njani? ukhathazekile malunga nezincedisi iimfama? ezi aziyongxaki zonke xa udibana neGroupeve uziphu yengoma emfamekisa izincedisi. ...
Ilaphu le-sunscreen egciniweyo lithengiswa kwi-FOB 1.5USD/m2
Ngamanye amaxesha, xa sicela iindaba emva kwekowuti, umxhasi waseNdiya uya kuthi: "phezulu kakhulu"; Umxhasi wase-UK uya kuthi: "Ndingafumana umboneleli ngexabiso eliphantsi kwimarike yasekhaya". mhlawumbi abanye abathengi baya ...
Izincedisi zeGroupeve blinds ziyakwamkela ukuhlolwa kwakho!
ngu admin on 21-10-31
Xa abathengi bebuza ngelaphu lethu leemfama okanye sivala iodolo kunye nabathengi malunga namalaphu eemfama, abanye babathengi baphinda babuze, ungandifumana umenzi wezincedisi zeemfama? Ixesha elide, thina...
IGroupeve iphuhlise ilaphu eNtsha yelinen yeSunsceen
ngu admin on 21-10-24
Njengoko sonke siyazi, amalaphu e-sunscreen athandwa kakhulu kwihlabathi lonke, kwaye ukubunjwa kwe-sunscreen yi-30% ye-Polyester kunye ne-70% ye-PVC. Siphuhlise amalaphu e-linen ye-sunscreen kulo nyaka, kwaye sihlaziye ...
Ukugcinwa kunye nokucoca iimfama ezithe nkqo
Ukugcinwa kweemfama ezimileyo 1. Ngokuqhelekileyo ucocekile (ukugcinwa) kwaye ususe uthuli ngebrashi eguquguqukayo okanye (umtshayelo weentsiba). 2. Ungasebenzisa isicoci ukucoca, kwaye usebenzise isicoci sevacuum isixhobo...
Uhlobo lokuSebenza lweemfama ezithe nkqo
Kukho iindidi ezimbini, ulawulo lwezandla kunye nolawulo lombane luyafumaneka kwiimfama ezithe nkqo. 1. Ulawulo lwezandla: 1) Iimfama ezithe nkqo ze-Manual zivaliwe kwaye zivulwe ngesandla, ezifana ne-traditio...
Indlela yokufaka iimfama ezithe nkqo ekhaya?
1. Indlela yokulinganisa ubungakanani besakhelo sangaphakathi iyafana neyokulinganisa isakhelo sangaphandle. Okokuqala, qiniseka ukuba ubunzulu befestile banele ukuba ii-shutter blades zihambe ngokukhululekileyo. ...
Ngaba iGroupeve ingakwazi ukwenza iisampulu yeencwadi zilungele abathengi? Ewe!
Okokuqala sibulela ngokwenene abo bathengi basicela ukuba sibenzele iisampulu ngokusebenzisa amalaphu abawachole kwiingqokelela zethu ezifanelekileyo kwintengiso yabo nokuba baodole ngaphantsi kwe-5 t...